Jid gooyo badan Oo Hortaalla Raiisul wasaaraha Cusub Dalka | Somalia News
Jid gooyo badan Oo Hortaalla Raiisul wasaaraha Cusub Dalka
Mudane Rooble oo maanta codka Kalsoonida helay ayaa hortaalla jid gooyo badan oo dhanka Siyaasada ah.
Waxa la dhowrayaa sida uu kaga gudbo culeyska uu wajihi doono,islamarkaana la sheegay in saaxiibadiisa uu la kaashan doono.
Akhriiso:Ra’iisul Wasaaraha Cusub oo shaaciyay qodobada uu diirada saari donaan
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hadal kooban ka jeediyay Kulankii Maanta Golaha Shacabka ay codka kalsoonida ku siiyeen ayaa marka hore u mahad celiyay Madaxweyne Farmaajo oo 17-kii Bishaan u Magacaabay Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaannada.
Waxaa uu sheegay in ilaa 8 qodob oo uu wax ka qaban doono maadaama Xildhibaannada ay codka kasloonida siiyeen, kuwaas oo kala ah.
1: Arrimaha Amniga
3: horumarinta dhaqaalaha
5: Dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa
6: Dib u eegista Dastuurka
7: Dhab u heshiisiinta
8:Iiskaashiga Caalamiga ah.
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya ayaa la filayaa in dhawaan uu si deg deg ah kusoo magacaabo Golihiisa Wasiirada maadaama waqtiga xilheynta Hay’adaha kala duwan ee dowladda uu geba-gabo yahay.
Inta badan Madaxda Soomaaliyeed markii Xilka rabaan waxay sameeyaan wax kasta oo qalbiga Shacabka lagu hantinayo hadana waxay noqdaan kuwo ballan qaadkooda fulin waaya.
Previous articleQM, Midowga Yurub iyo Britain oo fariimo u diray Raisul Wasaaraha cusub ee Somalia
Next articlefollow Olivier Véran’s conference live on the state of health in France